Tohana ho an’ny tanora mpianatra : nahazo foibe niomerika ny any Mahajanga | NewsMada
Tohana ho an’ny tanora mpianatra : nahazo foibe niomerika ny any Mahajanga
Manohy ny ezaka fanitarana sy fanapariahana ny teknolojian’ny informatika sy ny fifandraisan-davitra (Tics) ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny niomerika (MPTDN). Toy ny any amin’ny faritra hafa, nahazo foibe niomerika (bibliothèque numérique) koa ny any Mahajanga, ao amin’ny lisea Notre Dame. Toerana ahafahan’ny tanora mpianatra mampiasa ny internet ary ny informatika, hivelarany amin’ny fikarohana sy mikirakira ny niomerika samihafa.
Nitokana ity foibe ity ny minisitry ny MPTDN, Rakotomamonjy Neypatraiky, sady nianatra tao amin’ity sekoly ity rahateo. Nambarany fa “ho tsapa avy hatrany any amin’ny voka-panadinan’ny mpianatra amin’ny taom-pianarana ny fisian’ity foibe niomerika ity. Antony, hampazoto ny mpianatra hiezaka sady hanome tombontsoa azy ireo ny fampiasana ny informatika. Novatsin’ny MPTDN fitaovana informatika koa ny lisea Philbert Tsiranana sy ny lisea teknika any Mahajanga.
Ankoatra ireo, nanao fanentanana mikasika ny fampiasan’ny tanora ny tambajotran-tserasera sy sosialy ny mpiasan’ny MPTDN. Maherin’ny 300 ireo nanatrika ny fotoana. Tohizana any amin’ny faritra hafa koa ny hetsika toy izao.